Ere Akaụntụ Ahịa Ahịa - Aplus Global Ecommerce
Boosting Sales in an e-commerce business bụ a kpamkpam dị iche iche bọl egwuregwu karịa na a azụmahịa offline. Site na nzaghachi ndị ahịa ziri ezi na nke ezigbo iji nweta igbe ịzụta, enwere akụkụ dị iche iche nke ịre ahịa n'ịntanetị bụ ndị siri ike. Ọzọkwa, asọmpi siri ike sitere na azụmaahịa ọhụụ ọhụụ na-eme ka ụzọ a dị egwu. Njirimara dị omimi nke ahịa dị n'ịntanetị chọrọ ụzọ dị iche iche na ụzọ okike iji nwee ọganihu n'ahịa. Tụkwasị na nke ahụ, iwu ndị dị na mbara igwe e-Commerce na-agbanwe na teknụzụ kachasị ọhụrụ na ndị ahịa na-ebuwanye ngwa ngwa. Maka ebumnuche ndị a niile, azụmaahịa na-achọkarị nkwado iji bulie ahịa ma nweta uru
Ahịa na ahịa strategists na Aplus Global Ecommerce Ndi tozuru oke ahia nke otutu ulo oru e-Azụmaahịa site na afọ nke ahụmahụ ha n'ọhịa. Anyị na-enyere akụkọ Amazon aka ịbawanye ahịa site na inye aka na mpaghara ndị a:
Na-emeri igbe ịzụta
Njikwa Ojuju Ojuju Ojuju Ojuju Ojuju
Ọnụ na mbelata njikarịcha
Ndụmọdụ njikwa ndị ahịa
Ala ndị a bụ isi ihe na-ekpebi ahịa na azụmaahịa. Chịkwa ihe ndị a nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ iji chịkwaa ahịa.